Kwụsị na-echegbu onwe gị banyere Win32 / Zum! Trojan! Mmetụta Semalt Na-ekpughe Ntuzi Ntugide Nje Virus
Win32 / Zum! Trojan, dị ka aha na-atụ aro, bụ Trojan malware na-eme nzuzo intrusionsna Windows PC. Ị gaghị ama ya ruo mgbe ọ malitere ọrụ omume rụrụ arụ. Mbụ, ọ na-egbochi antivirus iji gbochie nchọpụta.Mgbe ahụ, ọ na-etinye onwe ya na ndekọ ebe ọ na-anọgide na-agbanwe ọnọdụ ya iji mee ka ndị ọrụ gbagwoju anya. Kasị njọ, Win32 / Zum! Trojan na-emeonwe ya wee gbasaa ha na faịlụ ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị na-etinye ọtụtụ oge online, mgbe ahụ malware downloads spyware nanje site na ihe nkesa di n'ime. Ọ bụ nro na-eche echiche banyere mmebi ọ ga-akpata.
Onye ọkachamara nke si Ọkachamara ,Julia Vashneva, enyewo nkọwa bara uru banyere otu esi ewepu nje ahụ n'ụzọ dị irè.
Olee otu ị ga esi esi oria?
Ị nwere ike nweta Win32 / Zum / Trojan site:
ozi ịntanetị spam
faịlụ weghaara netwọk p2p, iyi
na ịpị ịchọta mmapụta, njikọ, na ụfọdụ mgbasa ozi
Ozugbo trojan ahụ emetụtala PC gị, igwe ahụ na-amalite ịkwa ụda, ụfọdụ mmemmeenweghị ike ime ihe na-ezighị ezi, ihe nchọgharị weebụ na-anọgide na-akụda na data nzuzo gị nwere ike zuo ohi ma jiri ya na-emegbu gị nke gịego. Ileba anya n'isiokwu, ozi nke kaadị akwụmụgwọ nwere ike iji mmiri ara ehi gị. Ya mere, olee otu i si ewepu Win32 / Zum! Trojan? Na-agụ ma chọpụta.
E nwere uzo abụọ a nwalere ma wepu Win32 / Zum! Trojan malware..Ịnwere ike ịhọrọ ịhọrọ akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ usoro ntanetị. Ihe na-emecha mee ka ihe egwu ahụ ghara ịdị na-efu. N'eziokwu, ọ bụ ihendị ọkachamara ga-atụ aro iburu n'uche oge ị ga - ewe iji wepụ malware.
Ịga akwụkwọ ntuziaka
Nzọụkwụ 1: Malite ma ọ bụ bugharịa PC gị N'ODE nchekwa na ịkparịta ụka n'Ịntanet
gaa na mmalite menu
pịa Malitegharịa ekwentị
mgbe usoro ahụ na-agbanye bọtịnụ "F8" (bọtịnụ)
igodo menu buo oke
họrọ "ọnọdụ dị mma na ịkparịta ụka n'Ịntanet" wee pịa bọtịnụ bọtịnụ
Nzọụkwụ 2: Gbuo malware n'iji njikwa ọrụ
pịa bọtịnụ 'Alt', 'Ctrl' na 'Del' n'otu oge
windo njikwa ọrụ na-acha na ihuenyo
na usoro taabụ, mata ma gbuo usoro ahụ. Naanị pịa ya ma họrọ 'Ọgwụgwụ Ihe'.
Nzọụkwụ 3: Wepụ Win32 / Zum! Trojan site na nchịkwa gị
Nzọụkwụ 4: Wepụ Win32 / Zum! Nchọgharị nchọgharị nchọgharị na Mozilla, Chrome,Internet Explorer, Opera ma ọ bụ ihe nchọgharị ọ bụla ị na-eji
Nzọụkwụ 5: Wepụ niile Win32 / Zum! Faịlụ Trojan na ndekọ
pịa windo (W) na bọtịnụ Rị n'otu oge
igbe na-egosi. Pịnye 'regedit' mgbe ahụ OK
chọta na ihichapụ faịlụ ọjọọ niile
A ga-ewepu egwu ahụ. Nwee obi iru ala.
Wepụ Win32 / Zum! Trojan na-eji software
Iji ngwanrọ malware kachasị ike bụ ụzọ kachasị mfe ma dị irèiwepụ Win32 / Zum! Trojan. Akụrụngwa na-eme ngwa nyocha ngwa ngwa nke faịlụ niile gụnyere keyloggers na rootkit. Ọwepu malware mgbe o na-enye nchedo oge n'egwu site na egwu ndi ozo. SpyHunter bụ usoro ihe ngwanro na-emegide, ọ na-arụkwa ọrụ niileỤdị Windows. Nye ya gbalịa ma chebe gị site na nro nke njide Trojan Source .